Fiaraha-miasa : mpianatra ho mpitsara 50 niofana ao amin’ny zandary | NewsMada
Fiaraha-miasa : mpianatra ho mpitsara 50 niofana ao amin’ny zandary
Manaraka fiofanana eo anivon’ny zandarimariam-pirenena nanomboka ny 5 febroary teo ny mpianatra ho mpitsara miisa 50. Nosokafana tamin’ny fomba ofisialy izany ary haharitra herinandro ny faharetan’ny fiofanana. Tao amin’ny Toby Jeneraly Richard Ratsimandrava no nandraisana azy ireo ka ny teo anivon’ny “Direction de la police judiciaire” (DPJ) no nandray izany. “Ho hitan’ireo mpiofana ireo mandritra izany ny fifandraisan’ny asan’ny fitsarana sy ny zandary, ny fomba fanatanterahana ireo taratasy avy any amin’ny fitsarana sy ny fanaovan’ireo zandary ny famotorana sy fikarohana alohan’ny handefasana ny raharaha iray eny amin’ny fampanoavana ary indrindra ny fahasarotan’izany asa izany sy ny maha saropady azy”, hoy ny fanazavana.
Ankoatra ireo fampianarana hatao eo anivon’ny fibaikoana ny zandary, haparitaka eny amin’ny toby manerana ny faritra Analamanga, sy ny sampandraharaha misahana ny fikarohana ny heloka bevava (section de recherché criminelle) izy 50 mianadahy ireo mandritra izany fiofanana izany.
“Tsara ny manamarika fa isan’ireo fiaraha-miasa maro misy eo amin’ny fitsarana sy ny zandary izao fanatanterahana fiofanana izao ka hanamafy hatrany ny fifanakalozana efa natao mba hanatsarana ny fifandraisana arakasa”, hoy ny fanamafisana.
Tsiahivina fa manaraka fiofanana eo anivon’ny “Ecole nationale de la Magistrature et de greffe” ireo zatovolahy sy zatovovavy manamboninahitra mivoaka ny Akademia miaramila, manao zandary. Mbola miampy ny atao hoe “stage parquet” izany mandritra ny roa herinandro indray. “Rehefa mivoaka ny sekoly ambonin’ny zandary izy ireo ka any amin’ny fitsarana any amin’ny toeram-panendrena azy ireo tsirairay avy no hanatanterahany izany, izay vao manao ny fianianana maha “Officier de Police judiciaire” azy izy ireo”, hoy ny zandary.